ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: လျှို့ဝှတ်စွာ code ခံပြီ မေးလ်ပို့နည်း Password Email Compose
လျှို့ဝှတ်စွာ code ခံပြီ မေးလ်ပို့နည်း Password Email Compose
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ရေးဖြစ်တာက ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့မေးလ်ကို သူငယ်ချင်းတွေက password သိလို့ ၀င်ကြည့်ပြီဖတ်လို့တဲ့အဲဒါ မေးလ်ဖျောက်နည်းလေးသိချင်လို့တဲ့။ ကျွန်တော်လဲ နားလည်သလောက်လေး achieve လုပ်ပါလားလို့ပြောပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ဖတ်ပြီ ဖျက်ပစ်ပေါ့လို့(ဟီဟီး)အကြံကောင်းတွေပေးပါတယ်. password ချိန်ပေါ့လို့တောင် ပြောလိုက်သေးတယ်။ ဒါနဲ့ ရှာလိုက်တာ မြန်မာဆိုဒ်တစ်ခုမှာ ဖတ်ရင်နဲ့တွေ့လို့ စမ်းကြည့်တာ ကောင်းတာနဲ့ တင်ပြလိုက်တာ။ ကျွန်တော် နားလည်သလို ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ နားမလည်ရင် ကျွန်တော်ညဏ်လို့ နားလည်ရင် စာဖတ်သူတော်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
Gmail စာများကို အခြားသူ အလွယ်တစ်ကူ ဖတ်လို့မရအောင် လျှို့ဝှတ်စွာ code ခံပြီ ပို့နည်း ဖြစ်ပါတယ်
1. http://www.topsecretemail.com/Encode_Message.cfm အထက်ပါဆိုဒ်ကို အရင် click လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ကျလာပါမည်။
2. အထက်ပါ အဆင့်တွေပြီးပါက အောက်ပါအတိုင်း Encode လုပ်ပြီးသာတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ အောက်ပါအတိုင်းကျလာတာတွေကို select all (Alt+A) လုပ်ပြီး copy (Ctrl+c) မိမိရဲ့ gmail က composed mail ထဲက စာကိုယ်ထဲမှာ paste (Ctrl+ v) လုပ်လိုက်ပါ။ ကျန်တဲ့နေရာကတော့ mail ပို့ချင်တဲ့ လူကို ရွေးပြီ ပို့လိုက်ပါ။
3. အထက်ပါမေးလ်ကို လက္ခံရရှိတဲ့သူကိုတော့ မိမိခံထားတဲ့ နံပတ်ကို အရင် ပေးထားရပါ့မယ်။ ကြိုတင်ပြောထားပြီမှ ပို့တာကောင်းပါတယ် ဒါမှ လက္ခံရတဲ့ သူက ချက်ခြင် ဖတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. အထက်ပါ အဆင့်ထိက ပို့တဲ့သူရဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။။
5. အောက်ပါ အဆင့်တွေကတော့ လက္ခံရရှိတဲ့ သူက လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
6. ပထမ မိမိမေးလ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ။ မိမိဆီကို code ခံပြီပို့ထားတဲ့မေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ တွေ့ရသော စာများကို copy (Ctrl+c) လုပ်လိုက်ပါ။
7. http://www.topsecretemail.com/Encode_Message.cfm ဒီဆိုဒ်ကို click လိုက်ပါ။
8. ပုံ ၁ မှာ တွေ့ရတဲ့ DECODEamessage NOW ကို click လိုက်ပါ။ မိမိဆီ ပို့သော သူငယ်ချင်မှ ပေးထားသော code ကို အရင်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီရင် မိမိ copy ယူထားသော စာများကို paste (Ctrl+v) လုပ်လိုက်ပါ ပြီရင် Decode ကို click လိုက်ပါ.အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။
9. အထက်ပါအတိုင်း စာလေးကိုတွေ့ရမှာပါ ။။( မင်းကို အရမ်းချစ်တယ် တဲ့ အမှန်က ရေးထားတာတော့အများကြီးဗျ။ မကောင်းလို့ဖျက်လိုက်တာ။)
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 1:41 AM